Ciida Soomaalida kunool Dalka Mareykanka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciida Soomaalida kunool Dalka Mareykanka
Ciida Soomaalida kunool Dalka Mareykanka
Magaalada Minneapolis ee Gobolka Minnesota ee Dalka Mareykanka waxaa si wadajir ah looga tukaday Salaada Ciidul-Adxaa oo ahayd munasabad qiima weyn u leh dhamaan shucuubta islaamka.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Minneapolis iyo qaar kamid ah ajaanibta kale ee muslimiinta ah oo kunool dalkaasi, ayaa iyagana Salaadda Ciiddul Adxa ku oogay Masaajidda waaweyn ee kuyaala halkaasi, kuwaasi oo isugu marxabeynayay farxad iyo reynreyn.
Qaar kamid ah culimaa’udiinkii iyo waalidiintii Soomaaliyeed ee ka qeyb qaatay farxadda ciidda ee kunool Mareykanka ayaa waxaa ay u rajeeyeen shacabka Soomaaliyeed in ilaahay uu ka saaro dhibaatooyinka.
“Calankeyna Soomaaliyeed ilaahay sharaftiisa kor ha u qaado, dareenkeni waa uu fiicanyahay, balse waxaan leenahay, ilaahoy dalkeena nadabd nooga dhig,calankayna kor, cadowga ilaahay ha inaga qabto,ilaahay xabadda iyo dabka haka densho, roob allahainasiiyo,” Sidaasina waxaa ku duceysay hooyo Soomaaliyeed.
Dadka ayaa waxa wejiyadooda ka muuqday farxadda ciidda,waxaana ay isugu hambalyeynayeen munaasabadda ciida, iyadoona ciidani ay dadka muslimiinta ah ee ilaahay wax siiyay uga faa’iideystaan in ay ka farxiyaan dadka danta yarta ee aan waxba heysan.
Previous articleMuwaadiniinta 6 dal oo Soomaaliya ay kujirto soo dhaweeyey go’aankii maxakamadda Federaalka
Next articleMuwaadiniinta 6 dal oo Soomaaliya ay kujirto soo dhaweeyey go’aankii maxakamadda Federaalka